Duqeyn cirka ah oo ka dhacday Shabeellaha Dhexe | KEYDMEDIA ONLINE
Duqeyn cirka ah oo ka dhacday Shabeellaha Dhexe
Qoraallada kasoo baxay AFRICOM iyo Dowladda Federaalka ayaa lagu sheegay in duqeynta aysan wax waxyeelo ah kasoo gaarin dadka shacabka ah ee ku sugan degaanka la duqeeyay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn [Drone], oo ay leeyihiin militeriga Mareykanka ayaa weerar duqeyn ah ka fulisay degaan ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab, sida lagu sheegay war kasoo baxay AFRICOM.
Howlgalka oo dhacay Khamiistii shalay, July 9 ayaa waxaa lagu dilay hal xubin oo katirsanayda Al-Shabaab, iyadoo lagu bur-buriyay bar-koontarool oo Kooxda ku qaadi jirtay canshuurta oo ku taalla degaanka Hanti-wadaag oo katirsan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Qoraallada kasoo baxay AFRICOM iyo Dowladda Federaalka ayaa lagu sheegay in duqeynta aysan wax waxyeelo ah kasoo gaarin dadka shacabka ah ee ku sugan degaanka la duqeeyay. Inat badan war-saxaafadeedyada Militeriga Mareykanka ayaa lagu sheegaa in khasaaro shacab ka dhalay howlgalladooda.
Duqeyntan ayaa noqonaysa midii ugu horeysay, oo Mareykanku ka fuliyo Gobolka tan iyo 2017, waxuuna kusoo beegmayaa xili jidka isku xira Jowhar iyo Balcad kusoo xoogeysatay Al-Shabaab, oo maalmo kahorna lagu dilay Xildhibaan katirsanaa HirShabeelle.
Dawladda Soomaaliya waxay taageero ka heshaa Mareykanka iyo Midowga Africa, oo Ciidamo ka difaaca Al-Shabaab usoo diray, waxayna waxba kala socon inta badan howgaladda askarta ajnabiga ka fulinayso dalka, oo qaarkood shacab ku dhintaan.
0 Comments Topics: africom al-shabaab duqeyn
Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii Trump uu amar ku bixiyay in Ciidanka Mareykanka laga soo qaado Soomaaliya.
Trump oo bixiyay amar Ciidanka Mareykanka looga saarayo Soomaaliya
Warar 5 December 2020 1:30
Saldhigyadda Ciidanka Jabuuti ee Hiiraan oo la weeraray
Warar 24 January 2021 10:29
Halkee la geeyay Ciidanka Mareykanka ee ka baxay Soomaaliya?
Warar 24 January 2021 9:51